Raawwiin pirojektota misooma jallisiifi bishaanii onnachiisaadha
Raawwiin pirojektota misooma jallisiifi bishaanii onnachiisaadha Featured
Obbo Buzunee Tolchaa
Bara bajataa 2009tti raawwiin pirojektota misooma jallisiifi bishaanii irra caalaatti waan xumuramaniif jajjabeessaa ta’uu Ministeerri Bishaan, Jallisiifi Elektirii ibse.
Daariktarri miidiyaafi komunikeeshinii ministeerichaa, Obbo Buzunaa Tolchaa ibsa dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif kenanniin akka ibsanitti, pirojektotni misooma jallisiifi bishaanii, akkasumas elektirikii waggoota shan as bocamanii hojiitti seenan caalaatti bara 2009 keessa xumuramuun hojiitti seenaniiru.
Kunis, pirojektota ijaarsa hidhaa, misooma jallisiif lafa qopheessuufi bishaan dhugaatii akka biyyaalessaatti bocamuun hojjetamaa turan hedduunsaanii haala gaariidhaan xumuramuun tajaajila kennuu eegaluusaanii ibsanii, gariin barana kan raawwatan ta'uu eeraniiru.
Haala kanaan pirojektota xumuraman keessaa Naannoo Amaaraa, Gondaritti waggoota sagaliif hojjetamaa kan turan kanneen akka ijaarsa hidhaa Ribiifi Magac akka fakkeenyaatti kaasaniiru.
Kana waliinis ijaarsi hidha Gidaaboo %96 yoo xumuramu, Arjoo Dhiidhessaan %49.29 irra gahuusaa ibsaniiru. Kunis, pirojektota ijaarasa hidhaa qabaman keessaa hanga ammaatti sababoota gara garaatiin kan Arjoo Dhiidhessaa malee raawwiin pirojektota kaanii onnachiisaa ta'uu addeessaniiru.
Harkifannaa pirojektii Arjoo Dhedheessaatiif sababni kontiraaktaraa ta’uu Obbo Buzunaan himanii, Korporeeshiniin Hojiilee Bishaanii Oromiyaa hojicha xumuruuf fudhatuyyuu haala barbaadameen hojjechaa akka hinjirres ibsaniiru.
Jiraattotni misooma pirojektichaatiif kaafaman beenyaa waliin walqabatee yeroo addaddaatti gaaffii kaasaa turuusaaniis yaadachiisanii, hanga ammaattis furamuu akka hindandeenye himaniiru.
Kunimmoo waajjirrisaanii ittigaafatamummaa qabu hinbaane jechuu osoo hintaane rakkoonsaa yeruma sana naannichaan furamuu osoo qabuu lafarra harkifamaa har’a gahuusaa addeessaniiru.
Bara 2010tti pirojektotni raawwachuun hojiitti seenan Gidaaboofi Dhidhessaa ta’uu eeraniiru. Isaan kunneenis bara kana kan xumuraman yoo ta’e jiraattota naannichaa kuma 12 ol kan fayyadan ta’uus ibsaniiru. Pirojektii haaraan bara kana jalqabamu kan hinjirre ta’uus himaniiru.
Pirojektotni misooma bishaanii, jallisiifi elektirikii maallaqa deggarsa Baankii Addunyaarraa argameen kan hojjetamaa turaniifi jiraniidha. Pirojektotni kunneen yeroo jedhametti xumuramaa kan hinjirre ta’uus hubachuun danda’ameera. Kanaaf ammoo mootummaan rakkoo bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraa akka sababaatti kaasa tureera. Gama kanaan hojiileen bal’aan hojjetamaa jiraachuus ibsa Obbo Buzunaarraa hubatameera.
Torban kana/This_Week 11893
Torban darbe/This_Month 91730
Guyyaa mara/All_Days 1603688